Abenzi base China Magnesia Spinel Brick kunye nabathengisi | Umgcini ophezulu
IMagnesia Spinel Brick
Izitena zeMagnesia spinel zisebenzisa ubumsulwa obuphezulu be-magnesia kunye ne-magnesia alumina spinel njengezona zinto ziphambili ezenziwayo. Iqondo lobushushu lokudubula kunye nomoya wokudubula ulawulwa ngokungqongqo ukuze ube nokuguquguquka okuhle kunye nozinzo lokothuka, ukusebenza kwesikhumba somlilo kunye nokuxhathisa umhlwa Ukusebenza kungaphezulu kokumgangatho ophezulu wezitena ze-chrome.
UKUPHAKELA NOKUTHUNYELWA KWEENQWELO
I-Magnesium aluminium spinel inokumelana kakuhle nokubola, ukubola okunamandla kunye nokukwazi ukuxobuka, ukuxhathisa kwe-slag, ukuxhathisa i-abrasion, ukuzinza kokutshatyalaliswa kwe-thermal, ukuxhathisa ukushisa okuphezulu kunye nezinye iimpawu zokusebenza. Yinto ekrwada efanelekileyo ekuvelisweni kweemveliso ezinqabileyo ezinje ngemagnesia spinel yezitena zemimandla enobushushu obuphezulu bezinto ezijikelezayo zesamente, izitena zelayini zokuhombisa kunye neeleli. I-Magnesium-aluminium spinel isetyenziswa ngokubanzi kwizinto ezinqabileyo, ukunyibilikisa isinyithi, iisamente ezijikelezayo kunye neegilnikhi zeshishini.
Ukusebenza okugqwesileyo kwesibane / ukuqhuba kwe-thermal ephantsi, ulungelelwaniso olwandisiweyo lokushisa okwandayo
Ngaba ubhetyebhetye bobume obuhle
Ukuxhathisa okunamandla kukhukuliseko kunye nokungena / Ubushushu obuphezulu bokuthambisa ubushushu / Ukuxhathisa kukothuka okugqwesileyo
1. Endaweni yesanti yezitena e-magnesia-chrome, yenza izitena ze-magnesia spinel zezitena zesamente ezijikelezayo, ezingathinteli kuphela ungcoliseko lwe-chromium, kodwa zikwanokuxhathisa okuhle.
2. Isetyenziselwa ukwenza i-ladle castables, iphucula kakhulu ukumelana ne-linings yensimbi. Isetyenziswa ngokubanzi kwimathiriyeli yokwenziwa kwentsimbi. Ukulungiswa komgangatho ophezulu we-pre-synthetic spinel unikezela ngezixhobo ezitsha zokuvelisa ukuveliswa okungafunekiyo kunye nokumila okuphezulu okusulungekileyo.
Isitena seMagnesite alumina spinel
Amandla okuBanda okuBandayo (MPa)
Ukunyaniseka okubonakalayo (%)
Ukuxhathisa ngomothuko kwi-Thermal kwi-1,100 ℃
Ukuphinda ubambe kwakhona phantsi koMthwalo ℃ (0.2MPa T2)
Ukwenziwa kweMichiza (%)
- Isinyithi Umgca, Simahla Ibhodi ye Ngokubanzi Ukhamba
- Ezisisigxina Umgca ye Ukhamba (Udonga)
- ukudubula indawo phakathi rotary eziko
- ngaphezulu kwaye ezantsi utshintsho indawo ye rotary eziko
Egqithileyo Isitena seMagnesia seCarbon
Okulandelayo: Isitena saseMagnesia iHercynite
Magnesia Chrome Isitena
Isitena seMagnesia seCarbon
Isitena saseMagnesia iHercynite
Isitena saseMagnesia iDolomite